Vatashanyi avo vakasarudza kushanyira nyika yakanaka yeIsrael vanowana mukana wakasiyana-siyana wekufambidzana nezororo pamhenderekedzo yeMediterranean kana kufamba nenzira dzakanaka dzinogona kuwanikwa paGungwa Rakafa. Panguva imwe chete, vafambi vanogona kugadzirisa nyore nyore nyaya yekugara uye vanogara mune imwe yehotera, iyo iri muIsraeri kune nhamba huru.
Gungwa reGungwa Rakafa, Israel
Gungwa remeteoric ndiro gungwa remuori rinoshamisa pane rakarongeka. Inokurudzira hutano hwemuviri uye inoshanda sekudzivirira zvirwere zvakawanda. Mitsva muIsrael, iri kumhenderekedzo yaro, ndeyokuti vakagadzirira kupa vatenzi vavo kwete makamuri ezvakanaka chete, asiwo mararamiro ose ehutano-kubudirira. Unogona kunyora mahotera akakurumbira eGungwa Rakafa (Israel):
Leonardo Plaza Dead Sea Hotel maminitsi mashanu kubva kumahombekombe. Vatenzi vanogara mumakamuri ake vachakwanisa kunakidzwa nekunakisa panorama iyo inotanga kuGungwa Rakafa. Kune fitness centre uye spa centre panzvimbo inopa runako nekurapa mazai. Vashanyi vanogonawo kutora dhipinda mudziva rekushambira, iro rinenge rine simba rekurapa.
Dhanieri Dead Sea Hotel iri mumoyo wezvaizivikanwa zvekare zveIsraeli zveEin Bokek, kufamba kwemaminitsi matatu kubva padzimba yega, yakagadzirirwa zvakanaka. Panzvimbo yenzvimbo yakaoma kune dzose mudzimba dzekunze uye dzekunze, dzinogara dzichizadzwa nemvura kubva kuGungwa Rakafa. Mukuwedzera kune kurapa kwehutano, unogona kushanyira gym, enda kumusasa, tora whirlpool.
Hotel Oasis Gungwa Rakafa - iro rinowanikwa muimba yeEin Bokek uye pamusoro pezvose zvinoshamiswa nemhando iyo chivakwa ichivakwa, inorondedzerwa seMoroccan. Muhotera iwe unogona kushambira mumadziva ekushambira (mukati kana kunze), shanyira nzvimbo yepamusoro, chengetedza mu sauna kana muTurkey kushamba.
Hotel Spa Club iri pedyo nechekugungwa kweGungwa Rakafa, kure nemhenderekedzo yegungwa zvinongogumira maminetsi maviri. Ihotera yacho inoratidzirwa nekudzikama uye nerunyararo. Izvi zvinoitwa kuburikidza nekuisa mimwe mitemo kune vashanyi: makore avo haagoni kuva pasi pemakore gumi nematanhatu, havabvumirwi kusvuta uye kushandisa shandura. Mukuwedzera, hotera iyi inozivikanwa nokuda kwehutano hwavo hwakanaka, dzakawanda dzadzo dzinoshandiswa vachishandisa Dope reGungwa rakafa. Dzakanaka mumadzika ekunze uye kunze kwekunze, kune nzvimbo inokosha ye sunbathing.
Hotels muIsrael muGungwa reMediterranean
Chikamu chekumadokero kwenyika chinoshambidzwa neGungwa reMediterranean, mhenderekedzo yegungwa yakareba makiromita mazhinji, pamwe chete nekureba kwayo yakatambanudza tsvina yakachena yegungwa. Mitsva muIsrael paGungwa reMediterranean inomiririrwa nhamba inoshamisa mumaguta ose ekushandiswa : Tel Aviv , Herzliya , Netanya , Haifa , Ashikeloni neAshdhodhi . Pakati peemahotera akakurumbira iwe unogona kunyora zvinotevera:
Hotel Carmel Forest Spa Resort - iri muchiteshi cheguta reHaifa, ine nhengo yeredzi 5 uye inoonekwa seimwe yenzvimbo dzakanakisisa dzokugara. Izvi zvinokonzerwa nenzvimbo yaro yakasiyana: inowanikwa pakati pemasango, saka vaenzi vanogona kunakidzwa nemhepo yakachena. Munharaunda dzevoruzhinji dzehotera kune zvimwe zvipingamupinyi: pano hazvibvumirwi kusvuta uye kutaura pamusoro pefoni. Kugamuchirwa kwezviyero izvi kunoita kuti pave nerunyararo uye runyararo. Vanhu chete vakasvika kusvika makore gumi nematanhatu vanogona kuva vatenzi vehotera.
Hotel huru 1926 - zvakare iri muHaifa. Inosanganisira 2 yakavhara zvivako, chimwe chazvo chine mamwe mabhuku ebhajheji, hapana chifukidzo, uye imwe inopa mamiriro ekuvandudza.
Isrotel Tower Hotel iri muTel Aviv, maminitsi maviri kubva kumahombekombe. Inowanikwa muimba yekugara-gadzika makumi matatu, iyo inoshamisa ndeyekusasva dzimba yekushambi yakavakwa pamusoro pedenga, kubva ipapo pane chic kana cheMediterranean Sea.
Tel Aviv Embassy Hotel iri muTel Aviv, pedyo nehombekombe. Ane chimiro chisina kujairika chekugadzira, iyo inofananidzwa nemakumi mashanu-emazana ezana remakore rechi20. Inopa dzimba dzakagadzirwa kuti dzigadzire micheka yakaisvonaka, uye kudya kwekudya kwepamvura kunoshandiswa mangwanani oga oga.
Mitsva dzakanakisisa muIsrael
Aya mahofisi akakwirira muIsrael anomiririrwa nehotera dziri dzezvikamu 5 ne4 nyeredzi. Izvo zvinoratidzwa nehupo hwemakamuri anofadza nezvose zvakagadzirwa uye huwandu hweshumiro hupi hupi hupi hupi hunopiwa kuvashanyi.
Munyika yeIsrael, mahotera mashanu-nyanzvi anomiririrwa neyakadaro isingakanganwiki uye inozivikanwa pakati pevakashanyira mavara:
Hotel Royal Beach neIsrotel Exclusive Collection - ine gungwa rakagadzikana paGungwa Dzvuku. Mukuwedzera pakushambidza mugungwa, vashanyi vanogona kushanyira chimwe chezvikepe zvitatu zvekunze, kutenga tani yakanaka pane imwe nzvimbo yakanakisa, shanyira nzvimbo yepamusoro. Kune nzvimbo yekudyira iri panzvimbo iyo inoshumira nzvimbo yekuEurope uye yeEurope. Mumakiromita 9 kubva kuhotera kune nzvimbo yakakurumbira yepachikepe ye "Marine Observatory".
Isrotel Mambo Soromoni - imwe yenzira dzakanakisisa dzekumiririra hoteli muIsrael kumhuri dzine vana. Inowanikwa pedyo nechepamhenderekedzo yegungwa, maminitsi matanhatu kubva pairi. Basa rakawanda revana rakarongeka munharaunda yaro, kune dzimba dzevana dzakasiyana-siyana, nzvimbo dzekutamba, pano unogona kuraira kubysitting services uye kufudza mwana mune imwe nzvimbo yekudya yevana. Kuvabereki kune nzvimbo yekudyira umo zvokudya zveFrench zvakagadzirirwa.
Royal Garden Hotel yakakurumbira kune nzvimbo yayo yakanyatsonaka, ine munda wemichindwe uye 5 madziva ekudhara. Iyo yokudyira, iyo inoshanda pahotera, inoshumira zvokudya zvekudya kwekudya chamangwanani, uye buffet inopiwa nokuda kwemasikati uye kudya kwemanheru. Nokuti vana vakagadzirirwa nzvimbo inokosha yekutamba. Mamwe manheru, vashanyi vehotera vanozokwanisa kunakidzwa munhandare yemunharaunda, apo vanoratidza kuratidzwa mumutauro weLas Vegas.
Hotel U Suites - Dzimba dzepamusoro peGungwa - iyo ndeyekirasi yepamusoro-soro, vaenzi vachakwanisa kugara muimba dzechicchi, uko kune bhokoni rine maonero anoshamisa egungwa uye mabhati e hydromassage. Panharaunda yehotera kune nzvimbo huru yepa spa inopa zvirwere zvakawanda zvehutano.
Pakati pehotera dzakanaka dzenyeredzi ina muna Israeri, unogona kuziva zvinotevera:
Gungwa Dzvuku Hotel iri pedyo neEilat Airport . Gungwa roga roga maminetsi gumi kubva kune imwe netsoka kubva kune imwe nzvimbo yeMaman Beach yekudyara iripo, apo vaparidzi vanogona kunakidzwa nekudya kwepasi rose. Kune vatenzi vemahotera muresitorendi pane kutengesa kwe20%.
Hotel Eilat Luxury inowanikwa pamahombekombe akanaka eEilat uye iri yendeji yakagadzirirwa makamuri. Vatashanyi vachakwanisa kubhadhara makamuri mu mode yekupaka kana kufamba kwechikepe pedyo neEilat Gulf.
Hotel Astral Maris - kuwedzera kune zvivako zvakadai semunhu mukuru uye madziva emvura, pane kunyange imba yemakonti uye sinagogi.
Kune vafambi vasingakwanisi kubhadhara mari inodhura, mahofisi ezvitoro muIsrael anopiwa, akaiswa muzvikamu zvitatu uye 2 nyeredzi.
Zvinokwanisika kunyora mahofisi ehupfumi akadai anozivikanwa eEurope:
Club In Eilat Hotel iri pedyo neHurumende yeCharal "Coral Beach" uye Marine Park "Kuona Pasi Pasi Pasi" . Iine dziva rekunze, munda unofadza uye padenga reimba.
C-Hotel Eilat iri pedyo nekukwikwidza kwakafanana neNorth Beach neDolphin Reef. Pano, mhuri dzine vana dzinogona kugara zvakanaka, dzimba dzevanhu vakuru uye dzevana dzakagadzirwa panzvimbo, pane sauna uye nzvimbo yefitness, nzvimbo yekutamba yevana, kubysitting services inopiwa.
Village Astral iri mamiriyoni 700 kubva North North. Bhuku rekubhadharisa mabhizimusi rinoshandiswa pano mangwanani oga oga. Panharaunda iri pane dziva rokushambira uye nzvimbo yakakwirira yokuzorora.
Hotel Astral Coral inopa mamiriro ezvinhu akanaka kuvanhu vakuru nevana. Zuva rimwe nerimwe buffet inoshandiswa pakudya. Pedyo nehombe huru yakagadzirirwa tambo yakakosha yezuva. Vana vanogona kupedza nguva muimba yemakamuri.
Chii chingaunza kubva kuUAE?
Kutakura kweSaudi Arabia
Paki dzinofadza muUAE
Chii chinounza kubva kuSaudi Arabia?
Visa kune Saudi Arabia
Mazororo muSaudi Arabia
Airports of UAE
13 nyeredzi dzakasimudzwa nevabereki nevasiri varo zvepabonde
Kristen Stewart naAlicia Cargill
Vincent Cassel naTina Kunaki vachangotamba muchato
Mapepa muimba yekugezera - sei kusarudza yakanakisisa nzira yako pachako?
Mukomana mukamuri mazano kune mukomana
Curd hlama ye pizza
Pompomp for cheerleading nemaoko
Sei kubvisa cellulite kumba uye kukanganwa nezvayo nokusingaperi?
Pamela Anderson akadzokera kune firimu
Vashandi venguo dzegwayana
Kate Winslet ane makore 40 haamirire mwana